Da kor bi, Ananse sraa n’adamfo rabb ‘Mmm!’ ananse tumfur ne teaa mu wɔ bere a ɔrekɔ gyaade hɔ. ‘Asoaso, efuw ediban a wo renoa no bɛyɛ dɛw paa.’
‘Adɛn nti na wo ntweɔn ma yɛndidi ewimbir yi,’ asoaso na ɔrekasa yi. ‘Efuw ediban no mmbenee, naaso wɔbɛben a ɔrennkyɛr koraa.’
Nna Ananse nim sɛ ɔtena hɔ wɔ bere a ediban no gu so renoa a, asoaso bɛpɛ edwuma bi ama no ma no ayɛ, naaso Ananse tumfur ammba n’adamfo hɔ sɛ ɔrebɛyɛ edwuma bi. Nti Ananse ka kyerɛɛ asoaso, ‘M’adamfo pa, fa kyɛ me, na ɛwɔ sɛ me yɛ ndeɛma bi seisei ara. Ma me nwen wɛb mfa ne nkyɛn baako nkyekyer me nan na me mfa nkyɛn baako so nkyekyer wo kyɛnsee a wo de renoa ediban no. Me yɛ no dɛm a wo bɛtumi awosow wɛb no sɛ ediban no ben a, na me bɛba ne wo abɛdi.’
Asoaso gye too mu sɛ ɛyɛ asɛm papa nti ɔde Ananse ne wɛb kyekyeree ne kyɛnsee no na ɔyɛɛ n’adamfo no bae-bae.
Annkyɛr koraa na Ananse tumfur hun sɛ ɔnam n’adamfo adow dan enim. Ɛbaa no sɛ nna adow so gu so ara reyɛ ne ewimbir ediban.
‘Adɛn nti na wo ntweɔn ma yɛndidi ewimbir yi,’ adow na ɔrekasa yi.
Bio, nna Ananse nim sɛ ɔtena hɔ wɔ bere a ediban no gu so renoa a, adow bɛpɛ edwuma bi ama no ma no ayɛ, naaso Ananse tumfur nnyɛ n’adwen sɛ ɔrebɛyɛ edwuma bi. Nti Ananse ka kyerɛɛ adow, ‘M’adamfo pa, fa kyɛ me, na ɛwɔ sɛ me yɛ ndeɛma bi seisei ara. Ma me nwen wɛb mfa ne nkyɛn baako nkyekyer me nan na me mfa nkyɛn baako so nkyekyer wo kyɛnsee a wo de renoa ediban no. Me yɛ no dɛm a wo bɛtumi awosow wɛb no sɛ eduwa ne wo no ben a, na me bɛba ntɛmara ne no abɛdi.’
Adow gye too mu sɛ ɛyɛ asɛm papa nti ɔde Ananse ne wɛb kyekyeree ne kyɛnsee no na ɔyɛɛ n’adamfo no bae-bae.
Ɔnam kwan so rekɔ fie no, Ananse kɔɔ n’adamfofo nsia hɔ a wɔn nyinara gu so reyɛ wɔn ewimbir ediban.
Ɔkɔɔ akyekyerɛ, hɛɛ, opurow, kura, fɔks ne n’adamfo pa hɔg hɔ. Na obiara a ɔkɔɔ ne hɔ no, Ananse twaa atoro dadaw no ara. Na ma n’adamfo baako biara no, ɔween wɛb maa wɔn kyɛnsee. Nti ɛbaa no sɛ nna Anansi ne anan awɔtwe no nyinara kyekyer kyɛnsee foforo.
Nna Ananse ayɛ krado paa sɛ ɔbɛdi ediban no nyinara nka nka ara sɛ hɔg ne santom ne wo aben dadaw. ‘Dɛm bere yi de me ehunu sɛ me ayɛ aboro so,’ Ananse tumfur na ɔredwen yi. ‘Ediban bebree na me rebɛdi yi na meannyɛ fie mu nsiesie edwuma biara amma obiara mpo! Woana n’ediban mpo na ɛbɛdi kan aben.’
Dɛm bere no ara na Anansi tee wɔ ne nan baako mu sɛ obi rewosow ne wɛb no. ‘Ɛbɛyɛ asoaso a ɔrenoa efuw ediban dɛɛdɛw na ɔrefrɛ me yi,’ nea ɛrekɔ so wɔ Ananse adwen mu ni.
Hɔ ara na wɔwosoow Ananse nan baako so. ‘Asɛm aba!’ ɔteaa mu, ‘Ɛbɛyɛ adow na ne edwua ne wo aben yi.’
Anansi twee ne ho kɔɔ esuten no ho na ɔtoo ne ho too nsu no mu ama ne ntentan no ahohorow efiri ne na ho. Ntentan no yii firii ne nan ho baako baako kɔpem bere a Ananse tumfur tumii foow baa esuten n’ano bio.
Ananse n’eni baa no ho so na ɔhataa ne ho wɔ ewia no ase wie no, ɔhunuu biribi a ɛyɛ nwanwa. Na ne nan awɔtwe no nyinara mu atwe. Wɔ bere a nna kanee no wɔyɛ tiatia na wɔterɛw no, afei de nna ne nan no yɛ tenten ne fiafia! ‘Ɛbaa no sɛn na nna me eni reyɛ aber ade dɛm?’ asɛm a Anase redwen ho ni. ‘Afei hwɛ nea meabɛdan. Nnyɛ sɛ m’enya anan fiafia awɔtwe ara nko, na afei so ɛwɔ sɛ me noa me ara me ediban!’